I-condo ethokomele eqhele ngebanga lokuhanjwa ngezinyawo ukuya e-Village! - I-Airbnb
I-condo ethokomele eqhele ngebanga lokuhanjwa ngezinyawo ukuya e-Village!
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Tedd'
U-Tedd' uthole izilinganiso zezinkanyezi ezingu-5 ezivela ku-90% wezivakashi zakamuva.
I-condo yethu ehlukile nethokomele enamakamelo okulala angu-1 ibanga elihanjwa ngezinyawo ukusuka e-Village futhi phansi nje komgwaqo ukusuka e-Canyon Lodge. Nge-wifi, i-Apple TV, umshini wekhofi we-Keurig namanye amasevisi amaningi le ndawo ilungele iqembu labantu abangu-4 noma ukuvakasha kwezithandani okungu-2! Azikho izilwane ezifuywayo! UBUNCANE BOBUSUKU obungu-2! Isitifiketi# 8 Atlan-0001 TOT sifakiwe kuleli nani.
I-Condo yethu itholakala ebangeni lokuhanjwa ngezinyawo ukusuka e-Village nase-Canyon Lodge. Yindlu ehlotshiswe kahle enamakamelo okulala angu-1 enawo wonke amasevisi adingekayo ukuze ujabule futhi uphumule! Kukhona nombhede omkhulu we-Casper wezingxenye ezingu-2 egumbini lokuphumula.
Amafulethi e-San Sierra ayindawo encane enamayunithi angu-35. Zigcinwe kahle futhi zinabanye babanikazi abakhulu nabaphathi edolobheni lonke. Nakuba kungumphakathi othulile esinomakhelwane ngenhla naseceleni kwethu ngakho sicela uqaphele lokho futhi uhlale uhlonipha.
Ngiyakuthanda ukuxhumana nezivakashi zami kodwa imvamisa ngimatasa kakhulu. Ngicela uzizwe ukhululekile ukungithumela umlayezo noma kunini njengoba ngizokuphendula lokho kalula. Uma udaba luphuthumayo zizwe ukhululekile ukungishayela ucingo ku- (INOMBOLO YOCINGO IFIHLIWE).
Ngiyakuthanda ukuxhumana nezivakashi zami kodwa imvamisa ngimatasa kakhulu. Ngicela uzizwe ukhululekile ukungithumela umlayezo noma kunini njengoba ngizokuphendula lokho kalula.…